AKAỤNTỤ ỤLỌ NA EGO ONWE - USORO KACHASỊ MMA - MMEMME - 2019
Akaụntụ Ụlọ na Ego Onwe - usoro kachasị mma
Ọ bụrụ na ị na-eche ajụjụ maka ọnụ ọgụgụ dị mma nke ego nke aka gị na ụlọ ụlọ, ị ga-achọ ịnweta ihe ngosi nke ego na ego gị, mgbe ahụ, Excel bụ nhọrọ dị mma ma ọ bụrụ na ị nwere usoro iwu nke usoro ihe omume ahụ, mana ọtụtụ ndị ọrụ ga-adịkwu mfe iji mmemme pụrụ iche maka ndị a ihe mgbaru ọsọ, nke a ga-atụle n'isiokwu a.
N'ime mmemme nke ụlọ, m gbalịrị ịhọrọ nke kachasị mfe, n'echiche nke m, nke ọma na, n'otu oge, ndị ọrụ. N'etiti ha ka a ga-enye dị ka ụgwọ na nhọrọ nhọrọ. Echere m na akwụkwọ nlekọta ụlọ n'efu anaghị apụta "ihe ọjọọ": na mmemme ndị a tụlere n'efu, e nwere ngwaọrụ niile dị mkpa iji nweta ego maka ego ezinụlọ na isi ihe dị iche iche na-akwụ ụgwọ. Ntinye mmemme na Russian.
Ezinụlọ Pro 11 - Echere m na usoro kachasị mma maka akwụkwọ nlekọta ụlọ
Nke mbụ, ana m ede na ụgwọ akwụmụgwọ ụlọ Ezinụlọ Pro na-akwụ ụgwọ, mana echela na ị ga-aga n'ihu wee chọpụta nhọrọ nhọrọ. Nke bụ eziokwu bụ na ị nwere ike ibudata Family Pro 11 maka n'efu site na weebụsaịtị website http://www.sanuel.com/ru/family/ ma jiri ya maka ụbọchị 30, ọ bara uru na ebe a bụ ihe kpatara ya:
Na ahụmahụ m, nke a bụ otu n'ime usoro kachasị mma na nke kachasị mfe maka nzube a;
Ruo ụbọchị iri atọ, ị ga-enwe ike ịghọta nke ọma ma ọ dabara gị na n'ozuzu - ọ bụrụ na ị jikwaa idekọ ego gị niile, ego na ego. Ikekwe n'ihi nke a ị ga-abịa nkwubi na akwụkwọ nlekọta ụlọ abụghị maka gị. Mana ka ọ ka mma ị gbalịsie ike na ngwanrọ enyi-enyi;
Ọ bụrụ na n'oge ejiji n'efu ị na-enwe afọ ojuju na mmemme nke usoro ihe omume ahụ, mgbe ahụ, o yikarịrị, ị gaghị akwa ụta 500-600 rubles maka ya.
Usoro ihe omume maka ime ụlọ Ezinụlọ 11 Pro
Kedu ihe ihe omume a nwere ike ime? Ego nke ukwuu - idebe akaụntụ gị na ego dị iche iche, ego na ụlọ akụ. Ịkwụ ụgwọ mgbapụ, nhazi mgbaru ọsọ na atụmatụ mmefu ego ezinụlọ. Ụdị akụkọ akụkọ dị mma na ike ịmekọrịta na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba.
Uru ọzọ nke usoro ihe omume a bụ obodo buru ibu nke ndị ọrụ na ihe ọmụma, nke na-eme ka mmepe ya ma dị irè na-eji ya dị mfe karị.
N'ozuzu, ana m akwado ka ịnwale.
Sistemụ arụmọrụ akwadoro: Windows XP, Windows 7, Windows 8. E nwere nsụgharị maka gam akporo na mmekọrịta nkwụ ụgwọ.
Ego onwe onye
Akaụntụ Akaụntụ nke Ụlọ na-arụ ọrụ ọzọ na ngwaahịa a. Ọ ga-adịrị mfe maka Apple iPhone na iPad nwe, n'ihi usoro iOS nke usoro ihe omume ahụ na ikike ịmekọrịta data n'etiti ngwaọrụ.
Ego nke Onwe Gị Pro maka Windows
Na weebụsaịtị website //www.personalfinances.ru ị ga-ahụ nsụgharị abụọ nke usoro - akwụ ụgwọ na n'efu. Enwere ohere ụfọdụ, ma ọ ga-ezuru iji chọpụta ọtụtụ ohere na ịmara nke ọma na interface enyi na enyi ya.
Enwere ike na usoro ihe omume ahụ, ma eleghị anya, karịa ebe ọ bụla ọzọ:
Ijikwa ego mmefu ego nke ezinụlọ, ọmụrụ ahịa na-adọrọ mmasị na nkwụnye ego na ụlọ akụ, ịkwụ ụgwọ mgbazinye ego, mmefu ego na ụgwọ azụmahịa.
Atụmatụ ego na ego dị iche iche, budata ọnụego ego site na Ịntanetị.
Nchịkọta ego na ego na-akwụ ụgwọ ọ bụghị nanị site na edemede, kamakwa site n'aka ndị òtù ezinụlọ.
Nyefee n'etiti akụkọ.
Ịgba ụgwọ maka ụgwọ.
Ihe osise na akụkọ banyere ọrụ, edemede na ihe atụ ndị ọzọ.
Ego onwe onye na iPad
Enweghị m iji nwalee usoro ihe a, ma enwere m ezi echiche n'ọdịnihu. Usoro ihe omume ahụ nwekwara ihe ngosi nchekwa data, nke ga-eme ka ọ dịkwuo mfe ịbanye n'ime atụmatụ na ngụkọta ego nke ego ezinụlọ.
Osisi akwadoro: Windows, iOS. Ikike ị na-agba ọsọ site na windo mbanye.
Kasị Mma Home Bookkeeping - AbilityCash
Dị ka ọtụtụ nyocha, banyere usoro free a na-eme iji kwụọ ụgwọ maka ego onwe gị, ihe kachasị mma bụ AbilityCash, nke nwere ike ibudata na ọrụ site na saịtị //dervish.ru/.
O di nwute, usoro ihe omume a adighi ihe omimi karia Family Pro, mana enwere otutu ma o bu ihe ndi ozo. Ọ bụrụ na ị nwere ezigbo oge na AbilityCash ruo oge ụfọdụ, mgbe ahụ i nwere ike ịhụ otú ọrụ ngwá ọrụ a si dị irè maka ụlọ nyocha.
Dị ka o kwesịrị ịdị, na mmemme ị ga-achọta ihe niile ị ga - achọ:
Ịmepụta akụkọ na ịza ajụjụ maka njem nke ego na ego dị iche iche, mgbanwe na ọnụego ụlọ akụ.
Ịmepụta atụmatụ ego, na-achịkwa ego ego.
Ikike mbupụ na bubata data.
Na weebụsaịtị nke usoro ihe omume ahụ, ị ​​ga-ahụkwa otu nnọkọ ndị ọrụ, echere m, ga-enwe ike ịza ajụjụ ọ bụla ha nwere ike iji mgbe ha na-eji AbilityCash.
Sistemụ arụmọrụ akwadoro: Windows XP, Windows 7, Windows 8.
Ego - ezigbo mma nhọrọ
Ma eleghị anya ọ bụghịdị ezigbo mma, mana nhọrọ dị ukwuu maka ịdebe ihe ndekọ ego nke ego ezinụlọ bụ usoro ego ego, nke ị nwere ike ibudata n'efu site n'aka onye mmepụta ọrụ na saịtị //www.domeconom.ru.
Ihe kachasị mkpa nke usoro ihe a bụ ọrụ na ọtụtụ kọmputa n'otu oge, nkwado nke usoro nhazi niile a na-ewu ewu na ntinye aka nke data site na ndabara. Ọrụ ndị ọzọ dị ka ndị dị na mmemme ndị ọzọ:
Inye ego maka ego na ego na ndekọ dị iche iche - kaadị akwụmụgwọ, ego nkwụnye ego, ego.
Ngalaba a na-ahazi na nkebi edemede.
Ịmepụta mmefu ego, usoro atụmatụ ego nke onwe.
Ikike mbupụ data, ndabere na weghachi data.
Ihe ọzọ dị mkpa bụ ihe ruru eru na enyemaka zuru ezu n'iji usoro ihe omume ahụ eme ihe.
Osisi akwadoro: Windows, Linux, Mac os X.
Dị ka mgbe niile, ana m achọpụta na ọ bụghị usoro niile maka ime akwụkwọ nlekọta ụlọ kwesịrị ekwesị. Ma, dị ka ọ dị m, nke kachasị mma maka ọtụtụ ebumnuche na-akwụ ụgwọ na ngwanrọ software n'efu m wetara ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ịtinye - M ga-enwe obi ụtọ ịhụ nkọwa gị banyere isiokwu ahụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Mmemme 2019